Ikhansela embangweni wendlu yomxhaso | News24
Ikhansela embangweni wendlu yomxhaso
ISITHOMBE : lethiwe makhanyaUNkk Nonhlanhla Sithole ekhombisa ngamaphepha awubufakazi bendlu yakhe yomxhaso.
LUSAYINDIDA udaba lwendlu yomxhaso ebihlala ikhansela laka-Ward 10 uMnuz Nkosinathi ‘TK’ Gambu njengoba sekuvele izindaba zokuthi indlu abehlala kuyona akusiyona eyakhe kodwa eyomunye wesifazane ohlwempu wakhona KwaPata.
Ngokuthola kwe-Echo kuthiwa indlu lena ebeyihlala ikhansela nekuthiwa seliqede cishe iminyaka ethi ayibe mihlanu okanye lihlala kuyona akusiyona eyalo kodwa ngeka Nkk Nonhlanhla Ngcane Sithole wakhona KwaPata.
UNkk Sithole nokumanje ohlala endlini yodaka ngoba naku engenayo indlu yomxhaso kahulumeni uthi indlu yakhe yomxhaso wayibhalisa eminyakeni eminingi eyedlule ngemuva kokuba awelwa indlu ababehlala kuyona kudala.
Uthe ngemuva kwesikhathi ehambile waya kobhalisa azange athole impendulo yokuthi kungabe uzoyithola yini noma cha kwaze kwaba uyoyibhalisela futhi ngesikhathi kuthiwa kuyabhaliswa.
Uthe sonke lesi sikhathi ubengazi lutho futhi ubengakaze atshelwe lutho ngokuthi kungabe uyayithola yini indlu okanye cha kwaze kwaba ukuthi uyalusukumela lolu daba ngokuthi ahambe aye eMnyangweni wezeZindlu nathi ilapho afike athola khona ukuthi isicelo sakhe sendlu saphumelela.
“Ngesikhathi ngiya emnyangweni bafike bagcizelela bangitshela ukuthi indlu kufanele engabe kade ngaqala ukuhlala kuyona. Ngazama ukulisukumela lolu daba ngilubika kuwona amakhansela nangesikhathi kusakhona uMnu Msawenkosi Mchunu esayikhansela naye wangithembisa ukuthi uzoyilungisa kodwa lutho.
“Ngangibanikeza ngisho ubufakazi obuvela eMnyangweni obushoyo ukuthi indlu eyami kodwa abazange bangisize. Bathatha izincwadi lezi enginazo bathi bazongisiza ngazo ukuthola enye indlu,,” kubeka yena.
Uthe sekuphele iminyanga emithathu ethole isiqinisekiso sokuthi indlu yakhe yaphasiswa.
“Ngemuva kokuba sengisitholile isiqinisekiso kwabe sekuba khona umuntu ongitshelayo ukuthi inombolo yendlu yami lena engikhala ngayo ilena ehlala ikhansela. Ngazama ukukhuluma nabo bangitshela ukuthi akukho loko kodwa udaba lwami luzokhulunywa emihlanganweni lulungiswe ukuze ngizothola indlu yami.
“Kubuhlungu ukuthi ngithi mina ngihluphekile endlini engekho esimweni ngihlupheka kodwa ikhansela lona libe lihleli endlini ekumele engabe eyami ekubeni futhi yanesebenza kahle kahulumeni.Ngifuna indlu yami ibuyele kumina ngoba ayikho enye indlu yomxhaso engiyobuye ngiyithole ngaphandle kwalena enganikezwa yona. Umoya wami ubuhlungu ngodaba lwalendlu ngoba ngangihleli ngizibuza ukuthi kungani mina ngingayitholi ngaze ngazitshela nokuthiangeke nje ngize ngivote ngoba vele ukuvota akungenzeli lutho,” kubeka yena.
UNkk Sithole uveze ukuthi bahlala bayisithupha kulendlu yodaka abahlala kuyona kanti futhi akakho osebenzayo baphila ngemali yesibonelelo sikahulumeni.
Ngesikhathi i-Echo ihambele uNkk Sithole ufike wayikhombisa isiqinisekiso esishoyo ukuthi indlu eyakhe kanti yonke imininingwane yendlu ekusona ifana naleyo yendlu ehlala ikhansela.
I-Echo iphinde yathola ukuthi uMnuz Gambu wanikezwa indlu isihlobo sakhe uNkk Fucwana Zungu noyisekela Meya lasesiFundeni uMgungundlovu ukuba ayohlala kuyona.
Ngesikhathi uNkk Zungu ethintwa ngalolu daba uvumile ukuthi vele uyena owafaka uMnu Gambu ukuthi aye kohlala kuleyandlu.
“Indlu lena ekukhulunywa ngayo kwakungeka mamezala wami ongasekho kodwa manje isibhaliswe ngesinye isihlobo sami uSbusiso Ngcobo. Nginabo bonke ubufakazi obushoyo ukuthi indlu eyasekhaya angimazi lona wesifazane osevela esethi indlu eyakhe kanti futhi ngiyafisa ukumbona. Amaphepha lawa akhuluma ngawo ukuthi unawo akhomba ukuthi indlu eyakhe angimazi ukuthi uwathathaphi ngoba amaphepha endlu wonke akhona kumina. Wonke amaphepha akuthina ngoba sasikhipha izindlu zomxhaso.
“Lendlu kade yaba khona kangangokuba ngaphambi kokuba uNathi “TK” ahlale kuyona ngangihlalisa ezinye izihlobo zethu ngoba indlu yomndeni.
Bonke ebengibahlalisa futhi bebehlala mahhala ngoba lena indlu yomxhaso kahulumeni akuvumelekile ukuba ukhokhise umuntu ngokuhlala kuyo. Indlu yomndeni leyana angeke ize iyendawo, noma engasekkho futhi uNathi engasahlali kuyona iyoqhubeka ihlale ezinye izizukulwane,” kubeka yena.
Uphinde waveza ukuthi uzomthathela izinyathelo uNkk Sithole ngokufafaza into engasilona iqiniso ngoba efuna ukungcolisa igama lakhe.
Okhulumela uMnyango wezeZindlu esifundazweni sakwaZulu-Natal uMnuz Mbulelo Baloyi uthe izindlu azabiwa umnyango kodwa zabiwa umasipala.
Umasipala awutholakalanga ukuphawula kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.